Ukuthintela ukufakwa kwisibhedlele sombane
1. Phambi kokusebenzisa ibhedi yezonyango yombane esetyenziswayo, jonga kuqala ukuba ingaba intambo yombane iqhagamsheleke ngokuqinileyo. Nokuba intambo yesilawuli inokuthenjwa.
2. Intambo kunye nentambo yombane ye-actuator emgceni yesilawuli ayinakubekwa phakathi kwekhonkco lokuphakamisa kunye neefreyimu zebhedi ezingaphezulu nezisezantsi ukuthintela iingcingo ukuba zingasikwa kwaye zibangele iingozi zezixhobo zobuqu.
3. Emva kokuba inqwelo moya inyuswe, isigulana silele kwiphaneli kwaye asivumelekanga ukuba sityhale.
4. Abantu abanakuma ebhedini baxhume. Xa ibhodi engasemva iphakanyisiwe, abantu abahleli ebhodini ngasemva kwaye beme kwiphaneli yebhedi abavumelekanga ukuba batyhale.
5. Emva kokuba ivili le-universal librikiwe, akuvumelekanga ukuba lityhale okanye lihambe, linokuhamba kuphela emva kokukhulula i-brake.
6. Akuvumelekile ukuyityhala ngokuthe tyaba ukunqanda ukonakala kwendlela yokuphakamisa.
7. Indlela engalinganiyo yendlela ayinakwenziwa ukuthintela ukonakala kwevili kwindalo yonke yombhede wezonyango osebenzayo.
8. Xa usebenzisa isilawuli, amaqhosha kwipaneli yokulawula anokucinezelwa kuphela nganye nganye ukugqiba isenzo. Akuvumelekile ukucofa ngaphezulu kwamaqhosha amabini ngaxeshanye ukusebenzisa ibhedi yezonyango yombane esetyenziselwa imisebenzi emininzi, ukuthintela ukungasebenzi kakuhle kunye nokubeka engozini ukhuseleko lwezigulana.
9. Xa ukondlula umbhede ojongene nokusetyenziswa kwamandla ombane oxhanyulwa ngombane kufuneka uhanjiswe, iplagi yamandla mayikhululwe, kwaye umgca wolawulo lwamandla kufuneka ubethwe phambi kokuba utyhalwe.
10. Xa ukhuko oluninzi olusebenzisa umbane lufuna ukuhanjiswa, kufuneka kuphakanyiswe umzila wokukhusela abaguli ukuthintela ukuwa nokwenzakala ngexesha lokuhamba. Xa ukhuko lombane luhamba, abantu ababini kufuneka balusebenze ngaxeshanye ukunqanda ukuphulukana nolawulo lwendlela ngexesha lokuphunyezwa, kubangele ukonakala kumacandelo kunye nokubeka emngciphekweni impilo yezigulana.
Ixesha Post: Jan-26-2021
Inqwelo yeTyoli yoNyango, Itroli yoNyango ngeeDraw, Itroli yoNesi engenazingcingo, Itroli yesibhedlele, Itroli yeZonyango, Itroli yeLaptop,